China Automatic Stainless Steel Pineapple Juice Processing Machines ifektri nabakhiqizi |JUMP
Ulayini Wokukhiqiza Iziphuzo
Ulayini Wokukhiqiza Ukudla
I-Jam Namathisela & Nesiraphu Line
I-Crusher & Juicer
Ukuhlanza Slicing & Peeling
Ukupheka Ukomisa & Ukuthosa
Ukugcwalisa Ukuvala & (Un) Ukupakisha
Ukuxuba Inzalo & Ukwakha
Umshini Wokuhlunga & Wesisindo
Imishini Yokucubungula Ijusi Engenasici Yensimbi Engenasici
I gama le-brand:
umugqa wokucubungula uphayinaphu
Isevisi yangemuva kokuthengisa Ihlinzekiwe:
Onjiniyela abatholakalayo ukusevisa imishini phesheya kwezilwandle
izithelo fresh noma juice lokuhlushwa
izikhwama, amathini, amabhodlela
umugqa wokucubungula wonke
10 Isethi/Amasethi Inyanga ngayinye
indinganiso yokuthumela kwamanye amazwe.Uma unomyalo wakho, sizokulandela
Umugqa wokukhiqiza ijusi yezithelo
1.Isixazululo se-Turnkey.Asikho isidingo sokukhathazeka uma wazi okuncane mayelana nendlela yokwenza lesi sitshalo ezweni lakini. Asikunikezeli nje kuphela okokusebenza, kodwa futhi sihlinzeka ngezinsizakalo zokuma okukodwa,kusukela ekuklanyweni kwendawo yakho yokugcina impahla (amanzi, ugesi, abasebenzi), ukuqeqeshwa kwezisebenzi, ukufakwa komshini nokulungisa iphutha, insizakalo yempilo yonke ngemva kokuthengisa njll.
Iminyaka engu-2.15 isipiliyoni sokuthekelisa, ukuthutha kalula impahla uye emnyango wakho
I-3.isevisi eyenziwe ngokwezifiso, sizozama konke okusemandleni ethu ukuze sihlangabezane nemfuneko yakho.
4.Isiqinisekiso sekhwalithi: izinyanga eziyi-12.Ngemva kwalokho, onjiniyela nabo bayatholakala ezindlekweni zakho zokuhamba kanye nezindleko zezingxenye ezisele.Sinikeza isevisi yempilo yonke ngemva kokuthengisa.
Izinzuzo eziyinhloko zomugqa wethu wesistimu:
1. Ijubane eliphezulu lokukhiqiza elizuzwe ngesistimu yekhanda esanda kuklanywa (ikhanda elilodwa noma amakhanda angamawele atholakalayo), ukwethembeka okuthuthukisiwe kusuka kumodi yokusebenza elawulwa ngokugcwele ye-PLC yokuxilonga.
2. Ukuguquguquka okukhulu ngokuhlangabezana namazinga ahlukahlukene okupakisha ngemikhiqizo ehlukene.
3 Isebenzisana kahle neshubhu yesibulali magciwane seshubhu, uma ukungasebenzi okuthile ngesigcwalisi, umkhiqizo uzogeleza ubuyele ethangini le-buffer ngaphambi kwesibulala-magciwane se-UHT.
4. Ukusetshenziswa kwesikhwama esingenalutho esivalwe nge-hermetically kuqinisekisa ukuthi isikhwama sizohlala sinyumba ngaphambi kokuthi sigcwaliswe.
5. I-high pressure saturated steam isetshenziselwa ukuvalwa inzalo kokufakwa, i-cap kanye nengxenye eveziwe yesigcwalisi ngaphambi komjikelezo ngamunye wokugcwalisa.AKUWEKHO KHEMIkhali adingekayo.
6. Ukubekwa uphawu kwe-valve yokugcwalisa ngaphakathi kwendawo yokufakwa kugcina umkhiqizo ungekho ngokuphelele endaweni yokuvala iphakheji.
7. Ukuvalwa kokushisa kwe-hermetic kokufakwa kunikeza ukuvala okubonakalayo kwe-tamper kanye nomgoqo we-oxygen ophakeme.
8. Umklamo jikelele we-aseptic we-filler uvumela ukungaphazanyiswa.Ukusebenza kuyo yonke inkathi katamatisi/yezithelo, ukhulise ukusebenza kahle kwesitshalo sakho
9. I-CIP kanye ne-SIP kuyatholakala kanye neshubhu yesibulali magciwane
I-fruit juice processing line
Umango, uphayinaphu, upopo, izinto zokucubungula amagwava
Lo mugqa ulungele ukucubungula izithelo zasezindaweni ezishisayo ezifana nemango, uphayinaphu, upopo, ugwava nokunye.Ingakhiqiza ijusi ecacile, ijusi exubile, ijusi egxilile kanye nojamu.Lo mugqa uhlanganisa umshini wokuhlanza i-bubble, i-hoist, umshini wokukhetha, umshini wokuhlanza ibhulashi, umshini wokusika, umshini wokupheka kusengaphambili, umshini wokucwenga kanye ne-denudation, i-crusher, i-juicer yebhande, isihlukanisi, imishini yokuhlushwa, inzalo kanye nomshini wokugcwalisa, njll.Lo mugqa wokukhiqiza uklanyelwe ngomqondo othuthukisiwe kanye nezinga eliphakeme lokuzenzakalelayo;Imishini eyinhloko yonke yenziwe ngensimbi engagqwali yekhwalithi ephezulu, ehlangabezana ngokugcwele nezidingo zokuhlanzeka zokucubungula ukudla.Lo mqondo wokuklama umugqa wokukhiqiza uthuthukile, izinga eliphezulu lokuzenzakalelayo;Imishini eyinhloko yonke yenziwe ngensimbi engagqwali yekhwalithi ephezulu, ehlangabezana ngokugcwele nezidingo zokuhlanzeka zokucubungula ukudla.
Whatsapp/Line/Wechat/Mobile: 008613681836263 Welcome any inquiry!
Isixazululo se-Turnkey.Asikho isidingo sokukhathazeka uma wazi okuncane mayelana nendlela yokwenza lesi sitshalo ezweni lakini. Asinikezi nje kuphela okokusebenza, kodwa futhi sihlinzeka ngesevisi yokuma okukodwa, evela kwabenu.ukudizayina kwendawo yokugcina impahla (amanzi, ugesi, izisebenzi), ukuqeqeshwa kwezisebenzi, ukufakwa komshini nokulungisa iphutha, isevisi yempilo yonke ngemva kokuthengisa njll.
Inkampani yethu ibambelela enjongweni ye- "Quality and Service Branding", ngemuva kweminyaka eminingi yemizamo, isibeke isithombe esihle ekhaya, ngenxa yentengo ephakeme, kanye nenkonzo enhle kakhulu, ngasikhathi sinye, imikhiqizo yenkampani iphinde ingene kabanzi. eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, Middle East, Africa, South America, Europe kanye nezinye izimakethe eziningi zaphesheya.
Isevisi yangaphambi kokuthengisaSingaphakamisa ikhasimende umshini ofaneleka kakhulu ngokuya ngefomula yawo kanye nempahla eluhlaza.“Ukuklama nokuthuthukiswa”, “ukukhiqiza”, “ukufakwa nokugunyazwa”, “ukuqeqeshwa kobuchwepheshe” kanye “nesevisi yangemuva kokuthengisa”.Singakwethula umphakeli wezinto ezingavuthiwe, amabhodlela, amalebula njll. Siyakwamukela kuworkshop yethu yokukhiqiza ukuze ufunde ukuthi unjiniyela wethu ukhiqiza kanjani.Singakwazi ukwenza ngokwezifiso imishini ngokwesidingo sakho sangempela, futhi singathumela unjiniyela wethu efektri yakho ukuze afake imishini futhi aqeqeshe isisebenzi sakho sokuSebenza nokulungisa.Ezinye izicelo.Vele usazise.
Isevisi yangemuva kokuthengisa
1.Ukufakwa kanye nokugunyazwa: Sizothumela onjiniyela abanolwazi nabasebenzi bezobuchwepheshe ukuthi babe nesibopho sokufakwa nokusetshenziswa kwezisetshenziswa kuze kube yilapho okokusebenza sekufanelekile ukuze kuqinisekiswe ukuthi okokusebenza kusesikhathini futhi kuyafakwa ekukhiqizeni;
2.Ukuvakasha okuvamile:Ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzile kwesikhathi eside kwemishini, sizobe sisekelwe ezidingweni zamakhasimende, sinikeze okukodwa kuya kwezintathu ngonyaka ukuze size ekusekelweni kwezobuchwepheshe nezinye izinsizakalo ezididiyelwe;
3.Umbiko wokuhlola onemininingwane: Kungakhathaliseki ukuthi isevisi evamile yokuhlola, noma isondlo saminyaka yonke, onjiniyela bethu bazohlinzeka ngombiko wokuhlola onemininingwane yekhasimende kanye nenqolobane yereferensi yenkampani, ukuze kufundwe ukusebenza kwesisetshenziswa nganoma yisiphi isikhathi;
I-4.I-inventory yezingxenye ezigcwele ngokugcwele: Ukuze unciphise izindleko zezingxenye ku-inventory yakho, unikeze isevisi engcono futhi esheshayo, silungiselele iqoqo eliphelele lezingxenye zemishini, ukuhlangabezana namakhasimende isikhathi esingenzeka sokufuna noma isidingo;
5.Ukuqeqeshwa kochwepheshe kanye nobuchwepheshe:Ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kwezisebenzi zezobuchwepheshe zekhasimende ukujwayela okokusebenza, ukubamba kahle ukusebenza kwemishini nezinqubo zokuyilungisa, ngaphezu kokufaka ukuqeqeshwa kobuchwepheshe esizeni.Ngaphandle kwalokho, ungakwazi futhi ukubamba zonke izinhlobo zochwepheshe kuma-workshops asefekthri, ukukusiza ukubamba ubuchwepheshe obushesha futhi obuphelele;
6.Izinsizakalo zeSoftware kanye nezokubonisana: Ukuze uvumele abasebenzi bakho bezobuchwepheshe ukuba babe nokuqonda okwengeziwe kokwelulekwa okuhlobene nemishini, ngizohlela ukuthumela okokusebenza okuthunyelwa njalo kumagazini wezeluleko kanye nolwazi lwakamuva.Asikho isidingo sokukhathazeka uma wazi okuncane ngakho. ungasifeza kanjani lesi sitshalo ezweni lakini.Asikunikezeli nje kuphela izinto ezisetshenziswayo, kodwa futhi sihlinzeka ngesevisi yendawo eyodwa, kusukela ekuklanyeni kwakho indawo yokugcina impahla (amanzi, ugesi, umusi) , ukuqeqeshwa kwezisebenzi, ukufakwa kwemishini nokulungisa iphutha, impilo yonke isevisi yangemuva kokuthengisa njll.
Okwedlule: 100% Umshini Wokucindezelwa Wezimboni Wezemvelo we-Seabuckthorn Juice With Retaining High VC
Olandelayo: Ulayini Wokukhiqiza Umshini Womoba
I-Industrial Frozen Fruit Yogurt Production Line
Umshini Wokugcwalisa Ijusi Ewolintshi Umkhiqizi Wejusi Lemango...
Isisetshenziswa Sobhiya Osenziwe Ngokwakho
I-Turnkey Project Fresh Grape Orange Coconut Juic...
Pasteurize Dairy Condensed Milk Production Line...
Okuzenzakalelayo 100% Isiphuzo Sejusi Kabhanana Ehlanzekile Umkhiqizo...
Isakhiwo 3, No. 1558, Pingzhuang East Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone